HOME OUR SERVICES POSTAGE & SERVICES PHOTO GALLERY ORIENTAL RECIPES CONTACT US Search Products:
WELCOME TO MUM'S HOUSE™ - THE TASTE OF BURMESE
FRESHLY COOK - FOODS
» ALL NEW DISHES
» BEEF DISHES
» BURMESE SNACK
» CHEVON DISHES
» CHICKEN DISHES
» DUCK DISHES
» FISH DISHES
» NOODLES DISHES
» PORK DISHES
» PRAWN DISHES
» RICE DISHES
» SALAD DISHES
» SEA FOOD DISHES
» VARIOUS SOUP DISHES
» VEGETABLE DISHES
» VEGETARIAN DISHES
» ALL MUM'S HOUSE BRAND
» BURMESE BALACHAUNG
» COFFEE - TEA - DRY TEA
» DRY FISHES - SAUSAGES
» DRY FOOD - PACKETS
» FRIED CRISPY PACKETS
» INSTANT NOODLE GRAVY
» INSTANT SOUP PACKETS
» PICKLED FOOD - PACKETS
» PICKLED TEA - SPICES
» PRESERVED PACKETS
» SEASONAL FRUIT & VEG
» SHRIMP PASTE - FISH PASTE
» SPICES FOR KITCHEN
MONTHLY ISSUE BOOKS
» ASTROLOGICAL BOOKS
» CARTOONS - HUMOUR
» DHAMMA ARTICLES
» HISTORY - REFERENCE
» MONTHLY ISSUE MAGAZINES
» RECEIPE - OTHER BOOKS
» SCHOOL TEXT BOOKS
MUSICS - MOVIE - KARAOKE
» DANCE - COMEDY VCD
» KARAOKE VCD
» MOVIE VIDEO CD
» MUSIC AUDIO CD
OTHER BURMESE PRODUCTS
» BURMESE EMBROIDERY
» BURMESE GEMS ART
» BURMESE GIFT ITEMS
» BURMESE LACQUER WARE
» BURMESE MAKE UP
» ELECTRONIC DICTIONARY
» HYGIENIC HERBS
» SCHOOL BAGS - WALLETS
» TRADITIONAL CLOTHES
» VELVET SLIPPERS
ECONOMY DELIVERY BY
VISITORS HAVE BEEN VISITED
visitor(s) online now.
Thank you very much for visitting and shopping at Mum's House.
ORDERING THE FOODS & PRODUCTS
(FRESHLY COOKED FOODS)
For those who want to come and collect at Mum's House or home/on-site delivery, orders are taken minimum3-5days in advance to ensure your complete satisfaction and enjoyment .
For parties and functions such as "Birthday", "Wedding", "Food Offering" and "Donation", orders are taken minimum7days in advance for home/on-site delivery.
London Postcode Area Only
We no longer offer free delivery service from 1st April 2020 until further notice due to COVID-19 out break.
Your ordering items are delivered by Royal Mail™ and Parcel Force™ for all the customers in UK and abroad. There will be added postage and service charge (PayPal Transaction Fee) for your order.
We accept internet online banking transfer and cash into bank account for UK customers.We accept major credit card payment through Paypal™.
We only accept the payment by Paypal™ from oversea countries now and we accept major credit card payment through Paypal™. We do not accept oversea cheque and currency.
There are no return, refund and exchange/swap for all of your purchased items.
No Return - No Refund - No Exchange/Swap at all.
၁၊ ဈေးဆစ်ခြင်း သည်းခံပါ။ (နိုင်ငံကြီးသား ပီသပါ)
၂၊ အဆစ်တောင်းခြင်း သည်းခံပါ။ (မျိုးရိုးဂုဏ်ကို မြှင်.တင်ပါ)
၃၊ အလှူခံများအားလုံးကိုတော့ ကန်တော.ဆွမ်းပါ။
၀ယ်ယူစားသုံးလိုသောဟင်းလျာများကို ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း ကြိုတင်မှာပါ။ ဆွမ်းကပ်၊ အလှူ၊ မင်္ဂလာဧည်.ခံပွဲ၊ မွေနေ.ပါတီနှင့် လူအများစာ ဧည်.ခံပွဲများအတွက် မြန်မာအစားအစာများ မှာယူလိုပါက အနည်းဆုံး တစ်ပါတ် (၇) ရက်ကြိုတင်မှာပါ။
အမေ.အိမ်တွင် ဈေးဝယ်မည်ဆိုပါက အင်္ဂလန်နိုင်ငံသုံး ငွေစက္ကူနှင့် ချက်လက်မှတ်များကိုသာ လက်ခံပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံသုံးငွေကြေးများနှင့် ချက်လက်မှတ်များကို လက်မခံပါ။
ရပ်ဝေးမှ ဈေးဝယ်သူများအတွက် ဘဏ်ထဲသို.တိုက်ရိုက်ငွေထည်.ပေးခြင်း အင်တာနက်မှ ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်လည်း ငွေပေးချေနိုင်ပါတယ်။ ဥရောပနှင်. အခြားနိုင်ငံများမှ ဈေးဝယ်သူများကတော. Paypal မှတဆင်. ငွေပေးချေနိုင်ပါတယ်။
လန်ဒန်မြို.တွင်းနေထိုင်သူများအတွက် £၂၅.၀၀ တန်ဖိုးအထက် ၀ယ်ယူပါက အိမ်အရောက် အခမဲ. ပို.ပေးပါတယ်။ အနည်းဆုံးဝယ်ယူမှာကြားရမည်. တန်ဖိုးများကို Postcode များဖြင်. ခရီးအကွာအဝေးအလိုက် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုသိနိုင်အောင် ဒီနေရာကို Click လုပ်ပါ။
လန်ဒန်မြို.ပြင်ပ အခြားမြို.များ၊ ဥရောပနိုင်ငံများနှင်. ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ၀ယ်ယူလိုသူများအတွက် စာတိုက် (Royal Mail)၊ Home Network (Delivery Service)တို. မှတဆင်. ပို.ပေးပါတယ်။ ပို.ဆောင်ခကို ၀ယ်ယူသူကပေးဆောင်ရမှာပါ။ ပစ္စည်း အလေးချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ပို.ဆောင်ခကို ပေးရပါတယ်။ အသေးစိတ်သိချင်ရင် ဒီနေရာကို Click လုပ်ကြည်.ပါ။
UK နိုင်ငံအတွင်းမှ ၀ယ်ယူမှာကြားသူများအတွက် 1st Class Mail နဲ.ဘဲပို.ပါတယ်။ နေရာဒေသ အတော်များများကိုတော. နောက်တစ်နေ.ဆို ရောက်ပါတယ်။ တချို.မြို.တွေကိုတော. နှစ်ရက်လောက်ကြာမှ ရောက်ပါတယ်။ ၀ယ်ယူသူကတောင်းဆိုရင်၊ အမြန်ရယူလိုချင်ရင်တော. သေချာအောင် Special Delivery (Next Day) နဲ.ပို.ပေးပါတယ်။ နောက်နေ.မွန်းလွဲ ၁ နာရီမထိုးခင် ရောက်ပါတယ်။
၀ယ်ယူ အားပေးသုံးဆောင်သူများကို အမေ့အိမ် မှအထူးကျေးဇူးတင်လျှက်။
အမေ့အိမ် မြန်မာ့အစားအစာနှင်. မြန်မာပြည်ထွက် ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောာင်သည်။ အမည်တူ ဆိုင်ခွဲ လုံးဝမရှိပါ။
အမေ့အိမ် © Mum's House™
More than 1.5 million visitors visited our website on 1st Jan, 2010.
We've got more than 10,000 regular online customers from world wide.
Thank you for your customs at Mum's House.
© အမေ့အိမ် ™ ®
TIGER WITH FLYING HORSE & ELEPHANT
MUM'S FAVOURITE LINKS
Camden Lock Art Studio
Mandalay Inn (Cambodia)
Mee Koe Website
Vihara in UK
World Wide Links Exchange
LINK EXCHANGE - CONTACT US
Since 2003 to 2021 © MUM'S HOUSE ™